အမြန်လမ်းမှာ မှောက်ကြပြန်ပြီ - Real Gaming Myanmar
By thant naing /4months ago / Up to Date News / No Comments
၂၀၁၉ ခုနှစ်. မတ်လ(၃၁)ရက်နေ့ နံနက်(၀၆၃၀) နာရီချိန် နေပြည်တော် – မန္တလေးလမ်း မိုင်တိုင် ၂၇၈/၇ အနီး တွင် ယာဉ်အမှတ် YGN 5H-3— ISUZU BIGHORN ခဲရောင်ယာဉ်သည်အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ လမ်းလယ်ကျွန်းပေါ်ကျော်တက်ကာ တစ်ဖက်ယာဉ်ကြော ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင် တိမ်းစောင်းရပ်တန့်သွားခဲ့ရာ ယာဉ်ပေါ်ပါ (၃)ဦး (စိုးရိမ်ရ)ဒဏ်ရာရရှိသဖြင့် အမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ပေပင်လေး စခန်း တပ်ဖွဲ့ ဝင် များနှင့် အထောက်အကူ အဖွဲ့ များ. ကူညီ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည် ….. ။
လူနာများ မှာ(စိုးရိမ်ရ) ဒဏ်ရာ ရရှိပြီး. လူနာ များ ကိုယ်ရေး အချက်အ လက် စိစစ်ရန် အခြေအနေ မပေးသဖြင့်စစိစစ်ဆဲ. ဖြစ်ပါသည် … .။
၂၀၁၉ ခုနှစ်မတ်လ(၃၀) ရက်နေ့ နံနက်(၀၃၃၀) နာရီချိန်နေပြည်တော်- ရန်ကုန် လမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၃၄/၇-၁၃၅/၀ အကြားတွင် ယာဉ်မောင်း ဦးကျော်မြင့် (၅၃ )နှစ်(ဇ) ရပ်ကွက် မြောက်ဥက္ကလာမြို့နေသူ မောင်းနှင်လာသည့် BGO 1P- 4–Isuzu အဖြူရောင်ယာဉ် အားနောက်မှ ကို ဒီလစ် (၂၃)နှစ်ဇေယျဝတီ ဖြူးမြို့နေသူ မောင်းနှင်လာ သည့် BGO 7I- 4— ဟွန်ဒိုင်း အမျိုးအစား အနီရောင် နှင်းချယ်ရီExp ကားလိုင်းမှဝင်ရောက်တိုက်မိပြီး Isuzu ယာဉ်သည် လမ်းဘေးမြေ သားလမ်းပေါ်တွင် တိမ်းမှောက်ခဲ့သဖြင့် အမြန်လမ်းမကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ဗောဓိကုန်း စခန်း တပ်ဖွဲ့ ဝင်များမှ ကူညီဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်… ။ လူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု မရှိပါ …. ။
၂၀၁၉ ခုနှဈ. မတျလ(၃၁)ရကျနေ့ နံနကျ(၀၆၃၀) နာရီခြိနျ နပွေညျတျော – မန်တလေးလမျး မိုငျတိုငျ ၂၇၈/၇ အနီး တှငျ ယာဉျအမှတျ YGN 5H-3— ISUZU BIGHORN ခဲရောငျယာဉျသညျအရှိနျမထိနျးနိုငျဘဲ လမျးလယျကြှနျးပျေါကြျောတကျကာ တဈဖကျယာဉျကွော ဘယျဘကျခွမျးတှငျ တိမျးစောငျးရပျတနျ့သှားခဲ့ရာ ယာဉျပျေါပါ (၃)ဦး (စိုးရိမျရ)ဒဏျရာရရှိသဖွငျ့ အမွနျလမျးမကွီးရဲတပျဖှဲ့ပပေငျလေး စခနျး တပျဖှဲ့ ဝငျ မြားနှငျ့ အထောကျအကူ အဖှဲ့ မြား. ကူညီ ဆောငျရှကျလကျြရှိပါသညျ ….. ။
လူနာမြား မှာ(စိုးရိမျရ) ဒဏျရာ ရရှိပွီး. လူနာ မြား ကိုယျရေး အခကျြအ လကျ စိစဈရနျ အခွအေနေ မပေးသဖွငျ့စစိစဈဆဲ. ဖွဈပါသညျ … .။
၂၀၁၉ ခုနှဈမတျလ(၃၀) ရကျနေ့ နံနကျ(၀၃၃၀) နာရီခြိနျနပွေညျတျော- ရနျကုနျ လမျး မိုငျတိုငျအမှတျ ၁၃၄/၇-၁၃၅/၀ အကွားတှငျ ယာဉျမောငျး ဦးကြျောမွငျ့ (၅၃ )နှဈ(ဇ) ရပျကှကျ မွောကျဥက်ကလာမွို့နသေူ မောငျးနှငျလာသညျ့ BGO 1P- 4–Isuzu အဖွူရောငျယာဉျ အားနောကျမှ ကို ဒီလဈ (၂၃)နှဈဇယေဝြတီ ဖွူးမွို့နသေူ မောငျးနှငျလာ သညျ့ BGO 7I- 4— ဟှနျဒိုငျး အမြိုးအစား အနီရောငျ နှငျးခယျြရီExp ကားလိုငျးမှဝငျရောကျတိုကျမိပွီး Isuzu ယာဉျသညျ လမျးဘေးမွေ သားလမျးပျေါတှငျ တိမျးမှောကျခဲ့သဖွငျ့ အမွနျလမျးမကွီး ရဲတပျဖှဲ့ဗောဓိကုနျး စခနျး တပျဖှဲ့ ဝငျမြားမှ ကူညီဆောငျရှကျလကျြရှိပါသညျ… ။ လူထိခိုကျဒဏျရာရရှိမှု မရှိပါ …. ။
Previous: လူစကားကို လူနားလည်​​အောင်​ လူလို​ပြော
Next: ရန်ကုန်မှာ Bus ကားစီးမယ်ဆိုရင်